The 100 (2014) Season3Complete – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
3 Seasons 16 Episodes
Synopsis of The 100 (2014) Season3Complete
Season2မှာ မောငျ့ဝယျသာက လူအကုနျလုံးကို သတျခဲ့တဲ့ အတှကျ ကလကျတဈယောကျ ရှာပွငျမှာပဲနခေဲ့ပါတယျ။
ဒီလိုနဲ့ သူ့ကို မြိုးနှယျစုတှကေ အလိုရှိပီးဖမျးဆီးဖို့ဖွဈလာတဲ့ အခါ . . .
Earth မှာအုပျခြုပျရေးမူးဖွဈခဲ့တဲ့ သီယိုနဈတဈယောကျ အလငျးမွို့တျောကိုရှာတှပေီ့း သူ့လူတှပွေနျလာကယျဖို့ ကွိုးစားတဲ့ အခါ . . .
မြိုးနှယျစု ၁၂ စု ထဲကို ကောငျးကငျလူသားတှကေ ၁၃ ခုမွောကျအဖွဈ ဝငျဖို့ဖွဈလာရငျး မမြှျောလငျ့ပဲ အခကျအခဲတှေ
အာဏာသိမျးတာတှေ ကွုံရပီး ကောငျးကငျလူသားတှဘေယျလိုဆကျဖွဈလာမလဲ ?
ကမ်ဘာသားတှကေကော ဘယျလိုပွသာနာရှာအုံးမလဲ ? ရခေဲနိုငျငံလို့ချေါတဲ့ မြိုးနှယျစုတှရေဲ့ နနျးလုပှဲတှကေို စိတျဝငျတစား
ကွညျ့ရမဲ့ Season လေးဖွဈပါတယျ
Season2မှာ မောင့်ဝယ်သာက လူအကုန်လုံးကို သတ်ခဲ့တဲ့ အတွက် ကလက်တစ်ယောက် ရွာပြင်မှာပဲနေခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ သူ့ကို မျိုးနွယ်စုတွေက အလိုရှိပီးဖမ်းဆီးဖို့ဖြစ်လာတဲ့ အခါ . . .
Earth မှာအုပ်ချုပ်ရေးမူးဖြစ်ခဲ့တဲ့ သီယိုနစ်တစ်ယောက် အလင်းမြို့တော်ကိုရှာတွေ့ပီး သူ့လူတွေပြန်လာကယ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ အခါ . . .
မျိုးနွယ်စု ၁၂ စု ထဲကို ကောင်းကင်လူသားတွေက ၁၃ ခုမြောက်အဖြစ် ဝင်ဖို့ဖြစ်လာရင်း မမျှော်လင့်ပဲ အခက်အခဲတွေ
အာဏာသိမ်းတာတွေ ကြုံရပီး ကောင်းကင်လူသားတွေဘယ်လိုဆက်ဖြစ်လာမလဲ ?
ကမ္ဘာသားတွေကကော ဘယ်လိုပြသာနာရှာအုံးမလဲ ? ရေခဲနိုင်ငံလို့ခေါ်တဲ့ မျိုးနွယ်စုတွေရဲ့ နန်းလုပွဲတွေကို စိတ်ဝင်တစား
ကြည့်ရမဲ့ Season လေးဖြစ်ပါတယ်
YuuDrive , SharePw , Storage M-Sub,
Last air date2020-09-09
Home PageThe 100 (2014) Season3Complete